Sina Agrochemical Insecticide Diflubenzuron ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy agrochmical | Senton
Diflubenzuron famonoana bibikely agrochemical ho an'ny agrochmical
Anaran'ny vokatra Diflubenzuron
MW 310.68 g · mol − 1
Solubility amin'ny rano 0,08 mg / L
Solubility amin'ny solvents hafa DMSO: 12 g / 100 g; Acetone 0,615 g / 100 g
Famokarana: 300 taonina / volana
Fitaterana: Ranomasina, Tany ， Rivotra
Kaody HS: 3808911900
Famonoana bibikely agrochemical Diflubenzurondia anFamonoana bibikelynybenzoylureaKILASY. Ampiasaina amin'ny fitantanana ala sy amin'ny voly an-tsaha izy io hifehezana tsara ireo bibikely bibikely, indrindrasamoina kalalao lay,boll weevils,samoina gypsy, ary karazana hafa amin'nysamoina. Izy io dia be mpampiasa amin'ny Famonoan-tena any India ho an'ny fanaraha-maso ny olitra moka avy amin'ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka.Diflubenzuron dia bibikely famonoana bibikely ampiasaina amin'ny voly ala sy an-tsaha mba hifantina mifehy ny bibikely sy ny katsentsitra. Ireo karazana bibikely kendrena fototra no samoina gypana, fanday an-day ala, bibikely fihinana mandavantaona maro ary ny weevil boll.
Ho fifehezana bibikely mihinana ravina maro karazana any anaty ala, haingon-trano sy voankazo. Mifehy ny bibikely lehibe sasany amin'ny landihazo, tsaramaso soja, citrus, dite, legioma ary holatra. Mifehy ihany koa ny olitra lalitra, moka, valala ary valala mpifindra monina. Nampiasaina ho ectoparasitika amin'ny ondry mba hifehezana ny saoka, parasy ary ny olitra. Noho ny fisafidianana azy sy ny fahasimbana haingana amin'ny tany sy rano, ny diflubenzuron dia tsy misy fiantraikany kely na kely fotsiny amin'ireo fahavalo voajanahary amin'ny karazana bibikely isan-karazany manimba. Ireo fananana ireo dia mahatonga azy ho mendrika hampidirina amina programa fanaraha-maso mifangaro. Ny Diflubenzuron dia mandaitra amin'ny 25-75 g / amin'ireo bibikely fihinana ravina any anaty ala; amin'ny fifangaroana 0,01-015% amin'ny samoina codling, mpitrandraka ravina ary bibikely mihinana ravina hafa voankazo; amin'ny fifantohana 0,000075-0,0125% manohitra ny harafesina harafesina amin'ny citrus; amin'ny fatra 50 · 150 gagainst ny bibikely isan-karazany amin'ny landihazo (weevil boll landihazo, kankana, kankana), tsaramaso soya (soja beoper looper complex) ary katsaka (kankana). Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toa nyMpanelanelana amin'ny fitsaboana, Famafazana bibikely, Savony famonoana bibikely , Famonoana bibikely ao an-trano, fahasalamam-bahoaka sy ny sisa.
Mitady ny fanaraha-maso idealin'ny mpamokatra sy mpamatsy ny tsiranoka Blowfly? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny fanaraha-maso ny bibikely midadasika dia azo antoka avokoa. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina avy amin'ny bibikely famonoana bibikely Benzamide. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: Deltamethrin famonoana bibikely be mpampiasa
Manaraka: Ethofenprox famonoana bibikely avo lenta
Bibikely famonoana bibikely Diflubenzuron
Ny mpandrindra ny fitomboan'ny zava-maniry biolojika biolojika ...
Diflubenzuron famonoana bibikely avo lenta
Diflubenzuron 25% famonoana bibikely Tech